Mendrika ny hiadiana izany
“Tsy fantatrareo va fa izay mihazakazaka eo amin'ny tany fihazakazahana dia samy mihazakazaka avokoa, nefa ny iray ihany no mahazo ny loka? Mihazakazaha toy izany mba hahazoanareo. Ary ny mpihazakazaka rehetra dia mahonon-tena amin'ny zavatra rehetra. Kanefa ireny dia mitady satroboninahitra mety ho lo ihany, fa isika kosa ny tsy mety ho lo. Raha izaho ary, dia mihazakazaka, nefa tsy toy ny manao kitoatoa; ary mamely totohondry aho, nefa tsy toy ny mamely ny rivotra fa asiako mafy ny tenako ho mangana ka andevoziko, fandrao, na dia efa nitory tamin'ny sasany aza aho, dia holavina kosa ny tenako.” – 1 Kôr. 9:24-27.
Noraisin’i Paoly ho sary hampisehoana ny fiainana kristianina izany kilalao izany, ka nohizingizininy ny tsy maintsy hanaovana fanazaran-tena henjana, sy hifehezan-tena momba ny sakafo, mba hahazoana ny loka. “Ary ny mpihazakazaka rehetra dia mahonon-tena amin’ny zavatra rehetra”, hoy izy. Tsy maintsy mifady izay rehetra mety hampihena ny herim-batany ny mpihazakazaka; ary avy amin’ny fifehezan-tena henjana sy tsy misy fiatoany, no anaovany fanazaran-tena hampatanjaka ny hozatra rehetra ao amin’ny tenany. Rehefa tonga ny andro hihazakazahana, dia azony atao ny hampiasa ny heriny rehetra. Mbola lehibe lavitra noho izany ny ezaka tokony hataon’ny Kristianina, satria ny ho aviny mandrakizay no banjininy, ka tsy maintsy mahafehy tena amin’ny filàna izy, ary tsy andevozin’ny faniriany. Samy hofehezin’ny fitsipika henjana ny fahazarany rehetra, ka ny saina hazavain’ny fampianarana ao amin’ny Tenin’Andriamanitra sy tarihin’ny Fanahy Masina, no mihazona ny familiam-piainany. Rehefa voatafy fiadiana toy izany ny Kristianina dia hanao izay farany tratry ny heriny izy mba hahazoany ny loka. Tamin’ny hazakazaka natao tany Korinto, dia ny dingana faramparany no tsy maintsy ezahina mafy indrindra mba tsy hampihena ny hafainganam-pandeha efa vita. Toy izany koa, ny Kristianina izay efa manakaiky ny fetra, dia tsy maintsy manezaka mafy ary tapa-kevitra mihitsy hanao mihoatra noho ny nataony tamin’ny voalohany.
Asehon’i Paoly ny fahasamihafana misy eo amin’ny loka mety lo natolotra ny mpandresy tamin’ny kilalao fahiny, sy ny lokam-boninahitra mandrakizay atolotra ny Kristianina mandresy hatramin’ny farany. “Ny mpihazakazaka rehetra… hoy izy, dia mitady ny satroboninahitra mety ho lo ihany”. Tsy nitandro hasasarana mihitsy ny mpihazakazaka Grika, mba hahazoany ny satroboninahitra mety lo. Ary isika kosa, miady mba hahazoana loka tsara lavitra, dia ny lokan’ny fiainana mandrakizay. Koa noho izany, dia tokony ho vonona hiatrika ny fahafoizan-tena sy fandavan-tena lehibe indrindra isika, mba hahazo fandresena ao amin’io tolona io. - VM, tt. 2724-2732.